Isikhephe sasekhitshini seSinki yeSinki eBrashi
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / IiBhinki zeeSink / WOWOW Iflethi yasekhitshini yasekhitshini Ibrashi nickel
Thenga isitya sekhitshi yanamhlanje emgceni, iwaranti yonyaka wesithathu, ukuhanjiswa simahla!
IPlatifikhi yaseKhitshini yeModeli yokuKhawulezisa 2312301 yongeza intuthuzelo kunye nokusebenza kwiminwe yakho ekhitshini lakho ekhitshini okanye ekhitshini.
Isikhenkcisi sekhitshi sanamhlanje sakhiwe ukusuka kumgangatho ophezulu we-304 webanga ngentsimbi ye-stainless yentsimbi ngesiqinisekiso seminyaka emithathu yobomi.
Kuphela iHole Kitchen Sink Faucets yokuSebenza ngokuBanzi.
I-NickelConstruction eqinisekisiweyo eqinisekisa ukuqina kunye nobomi obude.
Kubandakanywa i-Hardware yokuKhwela, iiHoses eziManzi eziShushu kunye neCold, ubungakanani baseStandard.
Ulwazi lweenkcukacha zemveliso:
UKUQHUTYELA KAKHULU: isikulufu esine-spout esongezelelweyo sibonisa ukuhamba kwamanzi ngokuzinzileyo kwimeko entle, akusekho splash, esenza ukuhlamba kube ngokufanelekileyo nangobude obaneleyo, kuxelisa ukuhamba kwamanzi kwendalo.
HOT & AMANDLA IIMODYU EZIQHELEKILEYO: imigca yokuhambisa umbhobho oshushu kunye nobandayo onikiweyo, i-lever enye inokulawula ngokulula ubushushu kunye nevolumu, yenza umsebenzi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo
UMNYANGO WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA WE-NICKEL NICKEL SURFACE: yonke intshi ye-faucet itywinwe ngokuqinileyo, ubuhle be-nickel egcweleyo bungathintela ukuvela, ubumdaka, ukuxhathisa ukukrala kwemihla ngemihla, gcina ubuhle
ISIQINISEKISO SE-STEEL STEEL: Izinto ezingasasebenziyo zensimbi ezingenasiseko ziqinisekisa ukuba ixesha elide lisebenzisa ubomi kunye nomgangatho wezinto ezingadibaniyo, akukho kutu
Iwaranti yonyaka emi-3, Inkxaso yomthengi eyi-24/7: Isiqinisekiso esinqamlekileyo ngokuchasene nokuvuza, ukuqhuqha, ikhefu, kunye nesiphene, iphinde yagubungela ukubuya kwamahhala kwiintsuku ezingama-90, NICELA UQHAGAMSHELWANO EMAIL❤service@wowowfaucet.com
I-SKU: 2312301 iindidi: IiBhinki zeeSink, IFaucets yasekhitshini tags: Uqhekeze uNickel, iflethi, Ukuphatha icala elinye
12 x 8.6 x 2.9 intshi
Uyilo lwamanzi lwale mihla